Teknolojia fanamorana rivotra UV mahomby sy mahomby amin'ny taona 2020
Fotoana: 2020-07-09 Hits: 502
Ny fametahana azy eo ambonin'ny vatan'ilay substrate, eo ambanin'ny asan'ny hazavana ultraviolet, dia mety hiteraka akora biolojika na tsy biolojika hihetsika amin'ny fihenan'ny oxydation.
Avy eo dia afaka mamono bakteria isan-karazany amin'ny fomba mahomby izy io, ary afaka mamaivay ary manasitrana bakteria na holatra. Izy io koa dia afaka mamoaka fofona aina vokatry ny asan'ny olombelona.
Inoana fa ny fananana lo amin'ny TiO2 dia fantatra hatramin'ny antsasaky ny taonjato. Ny olana dia ny fananganana ny rindranasa izay toa voavaha izao.
Noho izany, dioxide titanium izao dia azo ampiasaina amin'ny fanamorana ny rivotra amin'ny alàlan'ny fampiharana isan-karazany ary ny iray amin'izy ireo dia jiro UV.
Fanandramana sy fikarohana marobe no mampiseho ny valiny sitraka ary izany no antony matanjaka amin'ny fananganana rindranasa an-trano sy ivelan'ny trano mampiasa azy io hanadiovana ny rivotra amin'ny bakteria.
Taloha: Ny torolàlana an'ny mpividy farany amin'ny fividiananao UV Lamps
Next: Tokony hividy jiro UV Mercury ve aho?